European Union ichaongorora kunyunyuta kwaSpotify pamusoro peApple | Ndinobva mac
Mavhiki mashoma apfuura, kwemazuva akati wandei takaenda kune imwe sipo opera yaikwikwidza Spotify neApple. Wekutanga akataura kuti yayo yekumimhanzi sevhisi yaive nemukana kubvira haufanire kubhadhara makumi matatu kubva muzana yemubhadharo wega wega unogadzirwa kuburikidza nekushandisa chimwe chinhu icho vese vanogadzira vanosungirwa kuti vaite, kunyangwe mushure megore izvi zvichidonha kusvika pa15%.
Apple yakapomera Spotify yekusada kubhadhara euro imwe chete yebasa rayo uye iyo swedish yakasimba vakamupomera mhosva yekuzvitonga. Mvura yakazodzikama asi ikozvino European Union iyo yanga ichida kupindira mune iyi nyaya, sezvanga zvichitarisirwa. Zvichida Apple haifanire kunge yakapindura pakutsamwiswa nekuti ndiyo yega yemapati maviri aive nechakarasika.
Sezvo isu tichigona kuverenga mune Yemari Nguva, European Union iri kugadzirira kutanga ongororo yepamutemo nezvehunhu hunonzi hunopesana nemakwikwi hwaApple ine yayo yekushambadzira mimhanzi sevhisi. Sekureva kwesvikiro iri, komisheni yakafunga nezve kuratidzwa kwechikumbiro chaSpotify uye maonero evatengi kuti vatange kuferefetwa kunogona kutora makore akati wandei.
Mukuda kwako, Spotify inova nechokwadi icho inogamuchira kusaruramisira kubva kukambani yaTim Cook, sezvo yakaramba chikumbiro cheApple Watch pane dzakawanda nguva muna2015 na2016. Imwe pfungwa ichaongororwa ndeye 30% Commission iyo Apple inochengeta kubva kunyoresheni yega yega, chikamu icho, sezvandakambotaura pakutanga kwechinyorwa chino. , inoderedzwa kusvika pa15% apo mutengi anga achibhadhara kweinopfuura gore.
Apple inoshandisa iyi komisheni kune ese maficha ayo anopa dijitari masevhisi, Netflix kuva mumwe weavo vakakanganiswa uye izvo hazvibvumidze kondirakiti sevhisi kubva kune chayo kushanda. Iyi mutero kana komisheni, kuidaidza neimwe nzira, inoenderana nemari yekubatira, kusimudzira uye kugadzirisa kwepuratifomu, zvigadzirwa zvekuvandudza, zvivakwa zvekubhadhara uye zvimwe kubhadhara.
Spotify, seNetflix, havabvumire kuhaya mabasa avo zvakananga kubva kunyorera kuti usabhadhara 30%. Apple haivabvumidze kuti vawedzere chinongedzo kune yayo webhusaiti kuitira kuti vangangove vatengi vanogona kusaina kuitira sevhisi, inogona chete kuvakoka kuti vaite saizvozvo kana vachida kunakidzwa nebasa.
Spotify haina zvachose chaizorasika kubva kutsvagurudzo iyi. Apple haikwanise kubvisa kunyorera kwayo kubva kuApp Store sezvo dare remakwikwi eEuropean raizozvikanda pairi. Tichafanirwa kumirira kuti tione kuti nyaya yacho inoguma sei.
Nemabatiro aizoita Apple neSpotify vachasvika pachibvumirano chakavanzika zvekuti kana isiri 30% kana 15%, ichi chimiro chinofadza mapato ese uye nekudaro munhu wese anokunda. Kambani yaTim Cook ine chokwadi chekuita zvakafanana nemimwe mikuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » European Union kuti iongorore kunyunyuta kwaSpotify pamusoro peApple
Vashandi veimba yekuparadzira yeAmazon vanoba zvigadzirwa zveApple zvinodarika madhora zviuru zana
Apple Pay ikozvino inoenderana nemamwe masevhisi ehurumende yeBritish